Madaxweynaha Khaatuma oo saxaafada kula hadlay Garoowe kana hadlay arrimo xasaasi ah. – RadioQandala.com
Cabdalle Maxamuud Cali (Cagalule) mp3
Cabdalle Maxamuud Cali (Cagalule), oo ah madaxweynaha Khaatuma oo maanta shir jaaraa’id ku qabtay magaalada Garowe, ayaa ku dhawaaqay inay la midoobeen dowladda Puntland kalana qeyb galayaan xoraynta iyo soo celinta dhulka maamulka Hargeysa uu xoogga ku haysto.
Waxaa kale oo shirkiisa jiraa’id uu ku sheegay in qeybo kamid ah golayaasha dowladda federalka Soomaaliya oo kasoo jeeda gobolada waqooyi in ay dowladda dhexdeeda kaga doodayaan kuna difaacaan gooni isku taagga maamulka Hargeysa.
Arrintaan ayuu sheegay inay muujinayso sida ay dowladda federalka Soomaaliya ugasii jeedo ilaalinta midnimada iyo wadajirka Soomaaliya islamarkaana ay isku koobtay magaalada Muqdisho. Waxaa uu sheegay masuuliyaddaas ay gabtay dowladda federalka Soomaaliya inay dowladda Puntland ku fooggan ttahay kana shaqeynayso sidii aanu dalka Soomaaliyeed u kala go’i lahayn.
Isagoo hadalkiisa wata, ayuu sheegay dowladda Puntland inuu waajibaad ka saaran yahay inay gacanteeda kusoo celiso degaanada maqan ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn islamarkaana wuxuu cadeeyay inay dhankooda ku garab taagan yihiin sidii dhulkaas lo xorayn lahaa.
Waxaa kale oo uu nasiib darro weyn ku tilmaamay kuwo kasoo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo uu ku sifeeyay inay rarato unoqdeen maamulka Hargeysa ayna taariikhda qoridoonta waxa ay maanta ummaddooda uhorseedeen sidoo kalena lagala xisaabtamidoono.
Madaxweyne Cagalule ayaa waqtiga uu shirka jaraa’id qabanayay waxaa garab fadhiyay wasiirka warfaafinta dowladda Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab, oo uu kusoo dhoweeyay xarunta wasaaradda warfaafinta Puntland ee Garoowe.
Garowe Cabdalle Maxamuud Cali (Cagalule), oo ah madaxweynaha Khaatuma oo maanta shir jaaraa’id ku qabtay magaalada Garowe, ayaa ku dhawaaqay inay la midoobeen dowladda Puntland kalana qeyb galayaan xoraynta iyo soo celinta dhulka maamulka Hargeysa uu xoogga ku haysto.
« DHALINYARADA SOMALILAND OO AAD UGA CAROODAY DUULAANKA SOMALILAND EE CARO-DHULBAHANTE
Allah Unaxariisto Cabdullahi Yuusuf Axmed oo Horay uga hadlay Duulaankii Somaliland ee Sool »